Ny kristaly fanasitranana dia mandeha tokoa? Vaovao farany tsara 2021
Raha miditra amin'ny tontolon'ny fanafody fitsaboana hafa ianao dia mety efa nandre momba ny kristaly. Ny anarana nomena ny mineraly sasany, toy ny quartz, na amber. Mino ny fananana fahasalamana mahasoa ny olona.
Mividiana vatosoa voajanahary ao amin'ny fivarotana vatosoa
Ny mitazona kristaly na mametraka azy ireo amin'ny vatanao dia heverina fa hampiroborobo ny fanasitranana ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-panahy. Ny kristaly dia tokony hanao izany amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsara amin'ny sahan'ny vatanao, na chakra. Raha toa ny kristaly manasitrana sasany manamaivana ny adin-tsaina, ny sasany kosa manatsara ny fifantohana na ny famoronana.
Ao amin'ny mason'ilay mpandinika
Ny toetran'ny fahasalamana mistika amin'ny kristaly fanasitranana
Fikarohana momba ny dokotera
Tsy mahagaga raha nanao fanadihadiana mahazatra momba ny kristaly ny mpikaroka. Saingy ny iray, natao tamin'ny taona 2001, dia nanatsoaka hevitra fa ny herin'ireny mineraly ireny dia "eo imason'ny olona mijery."
Tao amin'ny Kongresy Eoropeana momba ny Psikolojia any Roma, ny olona 80 dia nameno valim-panontaniana iray natao hanasongadinana ny finoany amin'ny fisehoan-javatra ara-panambadiana. Nangataka ny rehetra hisaintsaina dimy minitra ny ekipan'ny mpianatra. Raha mitazona kristaly tena kristaly marina na kristaly sandoka vita amin'ny fitaratra izy.
Aorian'izay dia namaly fanontaniana momba ireo fahatsapana tsapany ireo mpandray anjara rehefa nisaintsaina ireo kristaly manasitrana. Na ny kristaly tena izy na ny sandoka dia samy namoaka fahatsapana mitovy amin'izany. Ary ireo olona izay nanandrana avo tamin'ny valin'ny fangatahana paranormal-finoana dia nirona fahatsapana fahatsapana lehibe kokoa noho ireo izay naneso ny paranormal.
“Hitanay fa maro ny olona nilaza fa mahatsapa fahatsapana hafahafa izy ireo. Mandritra ny fihazonana ireo kristaly, toy ny fikolokoloana, hafanana ary hovitrovitra. Raha efa nilaza tamin'izy ireo mialoha isika fa izao no mety hitranga, ”hoy i Christopher French, mpampianatra psikolojia ao amin'ny Goldsmiths, University of London. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny vokatra notaterina dia vokatry ny herin'ny tolo-kevitra fa tsy ny herin'ny kristaly. ”
Fikarohana marobe no mampiseho ny herin'ny plasbo. Raha mino ny olona fa hahasitrana azy ireo ny fitsaboana iray. Betsaka amin'izy ireo no mahatsapa ho tsara kokoa taorian'ny nahazoany fitsaboana. Na dia nanaporofo aza ny mpahay siansa fa tsy misy dikany izany fitsaboana izany.
Ny fakana azy dia iray andrasana amin'ny mpahay siansa. Ary eny, azo antoka fa marina ny milaza fa ny kristaly dia tsy manana ny fananana fahasalamana miafina nomen'ireo mpampiasa azy ireo.
Fa ny sain'ny olombelona dia zavatra matanjaka, ary sarotra kokoa ny milaza marimarina fa tsy mandeha ny kristaly, raha faritanao ho toy ny tombony kely ny "asa".
“Heveriko fa ny fahitan'ny besinimaro sy ny mpitsabo ny plasbo dia zavatra tsy marina na hosoka”, hoy i Ted Kaptchuk, mpampianatra momba ny fitsaboana ao amin'ny Harvard Medical School. Saingy ny fikarohana nataon'i Kaptchuk momba ny plasbo dia manome soso-kevitra fa ny hetsika fitsaboana azy dia mety ho "tena izy" sy "mahery". Na dia mbola tsy nianatra kristaly aza izy ary tsy hanome ny heviny momba ny maha-ara-dalàna azy ireo na misy ifandraisany amin'ny fitsaboana hafa. Kaptchuk dia nanoratra fa ny valin'ny placebo ao anaty fitsaboana dia azo raisina ho lafiny miavaka amin'ny fahombiazany, ary ny tombony azo avy amin'ny placebo dia tokony hampiroborobo fa tsy hailika.
Dokotera maro no mino ny herin'ny placebo. Ny fanadihadiana nataon'ny BMJ tamin'ny taona 2008 dia nahatsikaritra fa ny antsasaky ny dokotera nanaovana fanadihadiana dia nitatitra fa nampiasa fitsaboana placebo hanampiana ny marary. Matetika ny dokotera dia manome soso-kevitra ny fanalana ny fanaintainana be loatra na famenon-tsakafo. Na dia tsy voalaza aza ny soritr'aretin'ny marary. Ny ankamaroany dia nihevitra ny fomba fanao amin'ny fitsaboana plasbo ho azo ekena, hoy ny fehin-kevitry ny mpanoratra.
Ny mitazona kristaly manasitrana, mazava ho azy, dia tsy mitovy amin'ny mitelina Advil. Aza manantena ny dokotera hanome sosokevitra kristaly amin'ny fitsidihanao manaraka. Raha ny fijerin'ny fitsaboana mahazatra sy ny siansa mifototra amin'ny porofo dia manondro ny fikarohana misy azy ireo fa mitovy amin'ny menaky ny bibilava izy ireo. Saingy ny fikarohana momba ny valin'ny placebo dia manondro fa na ny menaka bibilava aza dia mety hisy tombony ho an'ireo mino… mamaky bebe kokoa >>
ny fanangonana ny vatosoany tranombarotra voajanahary voajanahary